Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. शुद्ध सुनबाट बनेको बुलेट प्रुफ ट्वाइलेट, मूल्य १३ करोड रुपैयाँ – Emountain TV
एजेन्सी, २८ कात्तिक । केही मानिसमा अरुले भन्दा नितान्त नयाँ काम गर्ने लहड चल्छ र मनले आँटेको पूरा पनि गरी छाड्दछन् ।
छिमेकी मुलुक चीनमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । चीनमा आयोजित चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो नामक व्यापार मेलाका क्रममा एउटा यस्तो ट्वाइलेट प्रदर्शनीमा राखिएको छ, जुन पूर्ण रुपमा सुनबाट बनेको छ । यो ट्वाइलेटको सिटमा ३३४.६८ क्यारेटका ४० हजार ८१५ गोटा हिरा जडित छन् ।
हङकङको अरोन शुम ज्वेलरी फर्मका लागि कोरोनेटले उक्त ट्वाइलेट डिजाइन गरेको हो । उक्त ट्वाइलेटको मूल्य झण्डै साढे १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो ट्वाइलेटको एक खास विशेषता भनेको यो बुलेट प्रुफ रहेको छ ।
अरोम शुम ज्वेलरीका अनुसार यसमा सर्वाधिक हिरा जडित छन् र यसलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारी छ । यदि यो ट्वाइलेटले गिनिज बुकमा नाम लेखाएमा अरोम शुम ज्वेलरीको नाउँका विश्व किर्तिमानको संख्या १० पुग्नेछ ।
यसअघि अरोन शुमले ४ सय क्यारेट हिरा जडित एक गितार तथा १० हजार गुलाबी हिरा जडित जुत्ता बनाइसकेको छ । त्यस गितारको मूल्य साढे २२ करोड रुपैयाँ छ भने जुत्ताको मूल्य ४८ करोड रुपैयाँ छ ।
स्मरण रहोस् सन् २००१ मा हंगकंगका एकजना व्यापारीले आफ्नो ट्वाइलेट बनाउनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरेको समाचार आएको थियो । त्यसमा शुद्ध सुनबाट बनेको एउटा ट्वाइलेट कमोड थियो । साथै ट्वाइलेट कोठाको टायलहरुमा समेत सुनको लेपन गरिएको थियो ।